Onye na-ekesa mmiri → HoReCa • Hotels • ụlọ oriri na ọ •ụ •ụ • eringlọ nri Warsaw
Need chọrọ onye na-enye mmiri na nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ?ụ? Companylọ ọrụ Water Point na-enye onyinye ndị na-abụghị mmiri cylinder, ndị na-akersụ mmanya, isi mmalite nke ndị isi ụwa na ụlọ ọrụ ahụ, nke anyị bụ ndị nkesa naanị na Poland.
Ezigbo mma mmiri Ọ dị mkpa maka ndụ, ọ kwesịrị ịdị mgbe niile, ma n'ụlọ yana n'ebe ọrụ.
Ọzọkwa na ebe dịka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, cafes, ụlọ mmanya i hotels ọ dị mkpa na ndị ọbịa na-enwe mmiri na-akparaghị ókè na mmiri dị oke mma.
Mmiri a na-eweta ga-enwerịrị atụmanya nke ndị na-azụ ahịa, yabụ na ụlọ ọrụ na-eme ọfụma NKD Na Poland, ọ na-eji ihe ngwọta zuru ụwa ọnụ, na-akwadebe ebe obibi ya na ndị na-enye mmiri dị ọcha ma dị mma, isi iyi na ndị na-a publicụ mmanya ọha.
Ojiji nke teknụzụ mmepụta ọhụụ na-enye anyị ohere ịmepụta ngwaahịa nkesa mmiri dị elu nke na-emezu atụmanya nke ndị ahịa kachasị achọ.
Ndị a na-enye ọrụ na-eme ka ndị mmadụ na-ahụ maka mmiri dị mma kwa ụbọchị na họtel, ụlọ ndị ọbịa, ụlọ mmanya na ụlọ oriri, i.e. ebe ọ bụla ọ dị mkpa iji lekọta nchekwa na ahụike nke ndị ọbịa na-eleta ebe ndị a.
Ekwesịrị igosi ndị na-ekesa mmiri na họtel, ụlọ oriri na ọ restaurantụ orụ ma ọ bụ ebe a na-ekesa mmiri na arụmọrụ dị ukwuu maka nkesa mmiri yana teknụzụ jụrụ oyi eji.
Ekwesịrị imepụta ngwaọrụ nkesa mmiri e bu n'uche maka mpaghara HoReCa n'ụzọ ga - eme ka ịhụ na ịdị ọcha zuru oke nke iji ya.
Ndị na-ekesa ihe dị otú a nwekwara ike inwe usoro ihe eji eme mmiri ma ọ bụ cylinder CO2.
Ndị na-enye mmiri mmiri maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ orụ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ ensureụ ensureụ na-ahụ na ịdị mma nke mmiri ọ byụ usedụ ndị ọbịa na-eji.
Isi iyi ndị dị ugbu a na ndị na-a drinkingụ mmiri ọ drinkingụ areụ adịghị ọnụ ahịa iji rụọ ọrụ ma dị oke arụ ọrụ ma bụrụ ndị a ma ama na ahịa, na-ejide ugwu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ụlọ oriri na ọ cafụéụ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ guestụ highestụ, na ọkwa ndị ọbịa kacha elu. Uru ọzọ bụ atụmatụ nke ngwaọrụ a, nke a na-eme ka ndị na-a drinụ mmanya chọọ oghere ọ bụla.
Dispụ mmiri na-enye mmiri na-eme ka mmadụ nweta mmiri kachasị mma maka oge niile.
A na-emetụta ọkọlọtọ nke ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ orụ ma ọ bụ ụlọ mmanya, n'etiti ndị ọzọ, site n'ịdị mma nke mmiri ọ drinkingụ servedụ a na-enye ebe ahụ. Ọ bụrụ na akwadochara ya ma rụọ ọrụ nke ọma, dịka ọmụmaatụ na carafe nwere lemon na Mint, yabụ ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu ma na-adọrọ adọrọ n'otu oge, ọ ga-edozigharị ihe osise nke ebe ahụ.
Mmiri na-atọ ụtọ ma dị ọhụrụ, enweghị ọgwụ sọks, klorine na ụmụ nje, mmiri ahụ nwere ike isi na mmiri mgbapụta ọgbara ọhụrụ. Enwere ike inye mmiri a gwọchara ma mee ka ọ dị ọcha na karama ma ọ bụ karafes, ma ọ bụ mee ihe nwere ike ịmị mkpụrụ.
Ọtụtụ mmadụ na-eji igwe ịsacha mmiri ugbu a n’ụlọ ha ma na-atụkwa anya na mgbe ha na-eji ọrụ ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ha ga-ejikwa mmiri dị mma ma dị ọcha.
Ife mmiri si na onye nkesa ahụ ga - enwe ọmarịcha onyonyo nke ebe a, nke na - echekwa ahụike nke ndị ọbịa ya na gburugburu ya, n'ihi na nke a, ego a na --ewepụta belata belata.
Mmiri a kwadebere n'ụzọ dị otú a nwere ike ịbụ nnukwu ọgwụgwọ maka oge ọkọchị maka ndị niile akpịrị na-akpọ nkụ, yabụ ga-ekpebisi ike iji ọrụ ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ ahụ mee ihe.
igwe eji ere mmirimmiri efu na nkwari akụmmiri anaghị akwụ ụgwọ n’ụlọ nrimmiri ọkụ n'ime ụlọ nkwari akụmmiri efu na nkwari akụonye na-enye mmirionye na-enye mmirionye na-enye mmirionye na-enye mmiri maka họtel ahụonye na-enye mmiri mmiri maka ụlọ oririonye na-enye mmiri mmiri carbonatedOnye na - eme mmiri hc66lmmiri mgbazinye ụgwọ mgbazinye mmirimgbata mmirindị na-enye mmirigassing mmiriIgwe nju oyi na onye na-enye mmiriigwe gassing mmiriNgwaọrụ maka mmiri gassingngwaọrụ maka mmiri carbonatedNwe mmiri n’ebe a na-ere nrimmiri maka eriri afọmmiri maka ụlọ oriri na ọ .ụ .ụmmiri na-amị amị site na mgbata ahụmmiri ịnweta n'ụlọ nkwari akụmmiri n’ime ụlọ mmanyammiri na eriri afọmmiri dị na họtel ahụmmiri dị na kọfịmmiri dị n’ụlọ ebe a na-ere nrimgbata mmiri na nkwari akụpịa mmiri n'ụlọ nrimmiri mmirimmiri oyi na nkwari akụ